Dhibaatooyinka Macluumaadka Xawaaraha Mac OS X
Macs Talooyin & Qalabyo
Ogow waxa Macmiilkaada u keenaya argagax
Mid ka mid ah waxyaabihii ugu da'da yaraa ee isticmaala macmiilku waa argagax , oo ah marka uu Macku joojiyo jidadkiisa, madoobaado muuqaalka, iyo farriinta farriinta, "Waxaad u baahan tahay inaad dib u cusbooneysiiso kumbiyuutarka. gooyo. "
Haddii aad aragto farriinta naxdinta leh, marka hore marka hore, naso; ma jirto wax aad sameyn kartid waqtigan xaadirka ah si aad uga baxdo marka laga reebo inaad dib u bilowdo Mac.
Xidh Macada Ka Dib Kicin Panic ah
Marka aad aragto fariin dib u bilawday, riix oo hayso badhanka awoodda illaa Macadaadu bilaabmeyso.
Iyadoo taasi ka baxsan tahay, waa wakhti aad isku daydo inaad ogaatid waxa khaldan, ama ugu yaraan sidii Macalinkaaga dib ugu soo noqon lahaa xaaladda shaqada. Warka fiicani waa in macaamilkaaga shaqada mar kale uu noqon karo mid fudud sidii dib loogu soo celin lahaa. Sannadahayga oo dhan oo aan la shaqeynayay Macs iyo taageero farsamo, waxaan mar kaliya arki jiray shaashadda argagaxa ee xajmiga ah oo la xidhiidha maciile macquul ah. Xitaa markaa, Mac ayaa laga yaabaa in la dayactiray, laakiin waxay ahayd cudurdaar wanaagsan oo lagu beddelo halkii.
Maxaa keena argagaxa xero?
Waxaa jira sababo kooban oo ah in Macku uu hayo argagax, laakiin badankoodu waa kuwo ku meel gaara oo aan mar dambe la arki karin. Kuwani waxaa ka mid ah codsiyada liidata ee qoraalka ah, iskudhafka, darajooyinka, darawallada, iyo qaybaha kale ee software.
Marar badan waxaad arkaysaa argagax xabbo marka shuruudaha aan caadi ahayn ay dhacaan, sida laba ama in ka badan oo ah barnaamijyo gaar ah oo soconaya inta badan xusuustaada ayaa la isticmaalayaa . Si fudud u cusbooneysiinta Mac Macmadu waxay saxaysaa dhibaatada.
Waqtiyada kale, argagaxa qanjirada ayaa dib u soo noqda si ay u soo booqdaan wakhti ka waqti, oo aan si joogto ah u joogin, laakiin badanaa ku filan in aad daal aad u aragto.
Xaaladahaas, dhibaatadu waa mar kale sida caadiga ah ee software la xidhiidha, laakiin sidoo kale waxay ku dhici kartaa qalab hardware, ama isku-dhafka dhibaatooyinka software-ka iyo qalabka, sida noocyada khaladka darawalnimo ee qalabka gaarka ah ee qalabka, sida qoraa.
Argagaxda ugu weyn ee timaha timaadda waa midka dhaca mar kasta oo aad isku daydo inaad bilowdo Macadkaaga. Xaaladdan, dhibaatadu sida caadiga ah waa la xidhiidha hardware, laakiin waxay kaloo noqon kartaa wax fudud sida faylka nidaamka musuqmaasuqa ama darawalka.
Xallinta Kicinta Xuddunta
Maaddaama inta badan wakhtiga argagaxa ay kakooban tahay, waxay ku jahwareereysaa oo kaliya inaad dib u bilowdo Mackaaga oo aad dib ugu noqotid shaqada. Anigu kuma eedeyn doono haddaad tagto waddadan. Xaqiiqdii wax badan ayaan sameeya markaan haysto shaqo fiican oo aan ku qabsan karo, laakiin haddii aad haysato waqti, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad samayso arrimaha soo socda.
Dib u bilaw inaad isticmaasho Boot nabadgelyo leh
Ku bilow Macankaaga adoo haysta furaha wareegga iyo adigoo riixaya awooda barta. Ku sii wad in aad taabatid furaha wareega illaa Macalinkaaga Macmiilka ah. Nidaamkan waxaa loo yaqaan " Boot Safe" . Intii lagu jiro Boot Safe ah, Macagu wuxuu sameeyaa jeeg aasaasi ah oo ku saabsan qaabka hagaha bilowga. Haddii wax walwal ah, OS waxay ku kordhineysaa tirada ugu yar ee kernel kordhinta ay u baahan tahay in ay ordo. Taas macnaheedu waa bilaa bilawga ama alaabada la galo ayaa la ordi doonaa, dhammaan faylalka marka laga reebo kuwa isticmaala nidaamku waa naafo, iyo xajinta socodka culayskiisu waa la dumiyay.
Haddii Macalinkaagu uu ku bilaabo ganaax ku jira habka Amniga Amniga, ka dibna qalabka aasaasiga ah ee Mac-ka wuxuu shaqeynayaa, sida faylasha nidaamka ugu badan. Waa inaad hadda isku daydaa inaad Macsameysid inaad si caadi ah u bilowdo Macrimin (si fudud u bilaabi Macadaada). Haddii Macalinkaaga uu dib u bilaabo wax dhibaato ah, ka dibna qaar ka mid ah app ama darawal kale, ama nooc ka mid ah isdhexgalka u dhexeeya barnaamijyada iyo qalabka, laga yaabo inay keento argagaxnimo. Haddii argagaxa xaamilaha uusan dib uugu noqonin waqti gaaban, waxaad dhahdaa maalin ama laba isticmaalka, waxaad u tixgelin kartaa kaliya hal dhib yar oo aad u isticmaali karto isticmaalkaaga Mac.
Haddii Macalinkaaga uusan bilaabanin ka dib markaad ka bilowdo Habka Badbaadinta Badbaadada, markaa dhibaatada ay dhici karto waa mawduuc bilawga ama gelitaanka, warqad khaldan ama isku dhac qalalaaso, arin qalab ah, faylka nidaamka musuqmaasuqa, ama darawal / qalab hardware.
Cirifka Panic Logs
Marka Macadkaaga dib u bilowdo kaddib marka uu jiro argagax, xuruufta argagaxa waxaa lagu daraa faylasha qoraalka Mac Macaanku. Waxaad isticmaali kartaa app Console (oo ku yaala / Barnaamijyada / Utility) si aad u aragto qoraalada gawaarida.
La soo bandhigo qunsuliyadda.
Isticmaal xarfaha loo yaqaan "Consile app", dooro faylka loo yaqaan "Library / Logs".
Dooro diiwaanka DiagnosticsReporter.
Liiska warbixinta ayaa la soo bandhigi doonaa. Xulo warbixinta shilalka ee ugu dambeeyay si aad u aragto.
Waxa kale oo aad si toos ah u eegi kartaa warbixinta ogeysiinta ogeysiiska adigoo eegaya faylka logu ku yaal:
/ Library / Logs / DiagnosticsReports
Waxaad sidoo kale ka baari kartaa Folarka CrashReporter ee Console wixii ah diiwaangalin kasta.
Fiiri warbixinta muddo wakhti u dhiganta marka ay jirto argagax xabbadeed. Iyada oo nasiib-xumo ay siin doonto faahfaahin sida dhacdooyinka ay dhaceen isla markiiba ka hor inta aan la sheegin argagaxa.
Iska dhig qalabkaaga adigoo kala furaya wax kasta, laakiin kumbuyuutarkaaga iyo mouse-kaaga kaaga Mac. Haddii aad isticmaasho kumbuyuutar saddexaad oo u baahan darawal si uu u shaqeeyo, isku day in aad si ku meel gaar ah u bedesho kumbiyuutarka adoo isticmaalaya kumbuyuutarka Apple-ga ah. Marka wax walba oo dhan laakin kumbuyuutarka iyo cirbadaha waa la xirayaa, isku day inaad dib u bilowdo Mac. Haddii Macalinkaagu bilowdo, markaa waxaad u baahan doontaa inaad ku celcelisid hannaanka bilawga ah , dib u soo celinta hal shay oo qalab dibedda ah isla markaana dib u bilaabi doono midba midka kale, ilaa aad ka ogaato qalabka uu keenayo dhibaatada. Xasuuso in qalabyada ay ka midka yihiin jajabyada wicitaanada, furayaasha, iyo daabacayaashu ay dhammaantood noqon karaan dhibaatooyinka.
Haddii aadan weli bilaabi karin Macanka adiga oo aan haynin argagax, hadana waa waqtigii la hubin lahaa aasaasiga asaasiga ah. Macalinkaaga ku soo laabo adigoo isticmaalaya DVD-ka OS X ama qaybta Recovery HD . Markaad Macaladdaada ku dhejiso shaashadda ama dib u soo kabashada , isticmaal Utility Disk si aad u maamusho Dajinta Dayactirka Dhamaan wadooyinka ku xiran Macaamiisha, ka bilaw socodka bilowga . Haddii aad dhibaatooyin ku hayso dariiqaaga adag ee ah in Repair Disk aysan waxba ka qaban karin, waxaa laga yaabaa inay noqoto waqti lagu beddelo baabuurka.
Dabcan, waxaa jira arimo kale oo dhanka qalabka ah oo sababi kara argagaxa xaglaha oo ka baxsan kaliya baabuurkaaga. Waxaad yeelan kartaa mashaariicda RAM, ama xitaa dhibaatooyinka leh qaybaha asaasiga ah ee Mac, sida mashiinka ama nidaamka sawirada. Nasiib wanaag, Imtixaanka Apple Hardware wuxuu caadi ahaan heli karaa dhibaatooyinka caamka ah ee caadiga ah, waana sahlan tahay in la ordo:
Isticmaal Imtixaanka Apple Hardware Internetka si aad u ogaato Dhibaatooyinka Macmalkaaga
Dami dhamaan sheyada bilaabista iyo ku-soo-galayaasha, kadibna mar kale ku bilaw nidaamka Badbaadinta Amniga (hoosta ku dhufo furaha oo riix batoonka). Marka kabahaaga Mac , waxaad u baahan doontaa inaad joojiso shaashadda bilaabista iyo waxyaabaha ka soo gala Xisaabaadka ama Isticmaalayaasha & Kooxaha xulashada kooxaha.
Waxaa sidoo kale jira waxyaabo badan oo loo adeegsado hababka codsiyada qaarkood. Waxaad ka heli kartaa waxyaalahan: / Library / StartupItems. Wax walba oo bilawga ah ee ku jira faylkan waxa badanaaba ku yaala qaybta hoose ee lagu aqoonsaday magaca codsiga, ama qaar ka mid ah magacyada codsiga. Waxaad u gudbin kartaa dhammaan faylasha hoosta macaamiisha (waxaad u baahan kartaa inaad siiso sirta maamulka si aad ugu wareejiso).
Marka ay bilaabanto iyo alaabada soo-galayaasha ay naafo yihiin, waxaad Macdaarka ku bilaabi sida caadiga ah. Haddii Macalinkaagu uu bilaabo wax dhibaato ah, dib u soo celi waxyaabihii la bilaabi lahaa iyo waxyaabaha soo galaya, hal mar markiiba, dib u soo kabashada ka dib, ilaa aad ka heshid mid ka mid ah dhibaatada.
Waxaad isticmaali kartaa FontBook si aad u hubiso nooc kasta oo aad ku rakibtay FontBook. Mar labaad, ku bilaw Habka Amniga Badbaadada, ka dibna billow FontBook, kaas oo ku yaala / Codsiyada. Waxaad dooran kartaa noocyo badan oo ka dibna adeegso Xaqiijinta Aqoonsiga Haramaynta si aad u hubiso qaladaadka iyo faylalka faylalka.
Haddii aad aragto dhibaatooyin, waxaad isticmaali kartaa FontBook si aad u joojiso xarfaha ku habboon.
Dib u cusbooneysii OS X adoo isticmaalaya OS X Update Combo. Ku soo celi Macadaada Xaaladda Badbaadinta Badbaadada, haddii aadan hore u tagin, gal websaydhka Apple, iyo soo dejinta OS X Update Combo ee ugu dambeyn ee nidaamka aad isticmaalayso. Ku rakibida Combo Update , xitaa haddii Macagaagu horayba u ahaa heerka isla heerka sida cusboonaysiinta, wuxuu bedelayaa faylasha nidaamka nidaamka musuqmaasuqa ah ama dib u habeyn ah oo leh qaababka shaqada ee hadda jira. Ku rakibida Combo Update waa inaysan saameynin wax macluumaad ah oo ku saabsan macmalkaaga. Waxaan dhihi "ha ahaato " maxaa yeelay waxaan la tacaaleynaa Mac dhibaatooyin leh , wax kastana way dhici karaan. Hubi inaad haysatid najiin hadda xogtaada.
Haddii Combo Baabulku aanu helin wax shaqeynaya, waxaa laga yaabaa inaad ka fikirto dib u sameynta OS X iyadoo la isticmaalayo warbaahinta rakibaadda (OS X ilaa 10.6.x) ama Recovery HD (OS X 10.7 iyo ka dib). Haddii aad isticmaalayso OS X 10.5 ama ka hor, waxaad isticmaali kartaa Arjantin iyo Ku-rakibida ikhtiyaari si aad u ilaaliso xogta isticmaalaha ee horey u joogey. OS X 10.6 iyo ka dib ma laha hoolka iyo rakibidda xulashada. Sida ugu fiican, dib u samaynta OS waxay kaliya tirtiri doontaa oo rakibaysaa faylasha nidaamka, iyada oo laga tagayo faylasha user-ka. Mar labaad, way ka sii fiicantahay in la helo xogtaada hadda ah ee xogtaada ka hor inta aan la cusbooneysiinin ama dib u dhicin OS.
Marka aad dib u cusbooneysiiso OS, waxaad sidoo kale u baahan doontaa in aad ku shaqeyso Macluumaadka Cusub (Apple menu, Software Update) si aad Mac Macaanka u gaarsiiso heerka hadda jira. U hubso inaad sidoo kale dib u soo celiso darawallada, fiilooyinka, iyo iskudarka. Waxa ugu wanaagsan in dib loo soo celiyo hal mar, oo dib loo bilaabo ka dib, si loo hubiyo in midkoodna aysan ahayn asalka asalka ah ee argagaxa.
Haddii aanad xallin karin argagaxa xuduudaha
Haddii dib loo dhigo OS-ga iyo cusbooneysiinta barnaamijyada saddexaad ee darawaliinta iyo darawallada ma xallinayaan argagaxa xaglaha, markaa waa arrin wanaagsan oo ay ku jirto qalabka. U hubso inaad ka hubiso qaybta dhibaatada qalabka kor ku xusan. Haddii aad weli dhibaato qabto, fursada waa arin waa qalabka gudaha ee Macadaada. Waxay weli noqon kartaa wax aasaasi ah, sida RAM xun ama darawalad adag oo aan si sax ah u shaqeynin. Waxaan haystaa xasuusta xasuusta iyo dariiqyo badan oo ka yimaada Macsiyada kale oo si dhaqso ah u fududeynaya in lagu dhajiyo qalabka agagaarka ah ee ujeedooyinka dhibaatada, laakiin dadka intooda badan ma haystaan ​​raaxada qaybta qaybta gudaha. Sababtan awgeed, ka feker inaad Macsahdaada u qaadato xarun adeega Apple-ga ama loo oggol yahay. Nasiib wacan ayaan helay ninkeyga Genius Bar . Sameynta ballan waa mid sahlan, ogaanshahana waa bilaash.
Sida loo Aqoonsado Domain ee Mac OS X Mail App
Bedel Sidii Sidii Loo Helo si Loogu Sameeyo Xeerarkaaga
Sida loo soo celiyo ama u soo dhoofiso Macluumaad Macluumaad ah Mac OS X
U dhiibo Mac Apps si ay u Furaan Meel maskaxeed Khaas ah
Sida Loo Dhoofiyo Safarkaaga Safarkaaga Xagaaga ee ka soo xaadirta OS X Mail
Noocyada Kala Duwan ee Apple iyo Sidee iyo Markaad Isticmaali Kartid
Sidee loo tiriyaa Server Mail ah oo ku jira MacOS Mail
Sida loo qaabeeyo Saxeexa Heshiiska ee Heshiiska Mac OS X Mail
Sida loo xiro Emoji ee MacOS Emails
Sii Akhri Musikada Mumbalka: Tilmaamaha Talaabada Talaabada ah
8-da iPhone ee ugu fiican ee X ah ee lagu iibsado sannadka 2018
Waxyaabaha ugu fiican ee iTunes ah ee loogu talagalay sinaanta muusikada
Abuuritaanka Codsiga Gaariga Gacanta ugu Horeeya
Shirkadda Buddy Chat hadda waa koox wada sheekeysi ah ee AIM
Noocyada Xakamaynta Voltage
8-tii ugu Danbeysay ee Mini-yada la iibsado ee 2018
Sida loo xiro TiVo-gaaga Shabakadda Wireless
Garmin Approach G3 Gogosha GPS Golf Review
Ka hel kombiyuutarada AirGo kombiyuutarka ee leh Mashiinka Sima-ga ee Opera Mini
Sidee loo Sameeyaa Ammaanka Nabadgelyada Gurigaaga Wireless Network
Android Apps for Basketball Basketball